Ukhuphelo lwe-Foxy Apk ye-Android [iMovie + nothotho]-Luso Gamer
Ukhuphelo lwe-Foxy Apk ye-Android [iiMovie + nothotho]
Disemba 2, 2021 by John Smith
Ngoku sizise entendeni yezandla zakho ukuzonwabisa. Ukufaka iFoxy Apk ngaphakathi kwee-smartphones ze-android kuya kuvumela abasebenzisi be-android ukuba bonwabele iimuvi ezingapheliyo kunye nothotho lwasimahla. Ekuphela kwento abayifunayo kukukhuphela inguqulelo yamva nje yosetyenziso apha.
Uninzi lwamaqonga afikelelekayo kwi-intanethi kubandakanya iNetflix kunye neAmazon Prime. Zithandwa phakathi kwabasebenzisi be-android kwaye uninzi lwababukeli bacebisa amaqonga anjalo. Ngenxa yokuba amaqonga anjalo anika ukufikelela ngokuthe ngqo kumxholo wokuzonwabisa.
Kodwa kukho ingxaki enye abalandeli abanokuthi bafumane kuyo ngelixa befikeleleka. Loo ngxaki kukurhuma kweprimiyamu okanye ilayisenisi yepro. Yiyo loo nto ithathela ingqalelo umrhumo weprimiyamu ixabisa abaphuhlisi abaqulunqiweyo beFoxy App.
Yintoni iFoxy Apk
IFoxy Apk liqonga lokuzonwabisa elikwi-intanethi elakhiwe ligxile kubasebenzisi be-android. Isizathu sokuseka iqonga kukubonelela ngeqonga elikhuselekileyo le-intanethi. Apho ababukeli banokusasaza ngokulula kwaye bonwabele ukubukela umxholo wokuzonwabisa ongapheliyo.
Njengoko besitshilo ngaphambili ukuba uninzi lwamaqonga ahlukeneyo afanayo ayafumaneka kwi-Intanethi. Ezi zidumileyo kwaye zihamba phambili phakathi kwabasebenzisi be-android. Kodwa uninzi lwala maqonga afikelelekayo kwi-intanethi ahlawulelwayo kwaye afuna ubhaliso.
Ngaphandle kokuthenga umrhumo, akunakwenzeka ukufikelela kumxholo. Ke ngoko kuthathelwa ingqalelo ukufikeleleka lula nokusimahla kumxholo wokuzonwabisa. Abaphuhlisi ekugqibeleni bayile le android emangalisayo Imovie App kubasebenzisi be-smartphone.
Ngoku ukudibanisa iFoxy Movie Apk ngaphakathi kwe-smartphone ye-Android kuya kuvumela abathandi beMovie. Ukusasaza kunye nokukhuphela iividiyo ezingenamkhawulo simahla. Ekuphela kwento abayifunayo kukukhuphela inguqulelo yamva nje yesicelo kwaye wonwabele umxholo weprimiyamu.
ubungakanani 22.66 MB
Igama lepakheji com.foxystreaming.tv
Iyafuneka i-Android 5.0 kunye noHlanganiso
udidi apps - ukonwatyiswa
Xa siphonononga ifayile yesicelo nzulu emva koko safumana iqonga elinobutyebi kwiimpawu. Oko kubandakanya uMphathi wokuKhuphela, iiCategories, iTV ebukhoma, Uluhlu lokuHlola oluThandayo, isihluzi sokuKhangela ngokweSiko, isikhumbuzi seSaziso, iDashbhodi yokuSeta ngeNgcaciso kunye nokunye.
Olona kongeza lubalulekileyo abasebenzisi abaya kuluthanda ziiseva ezikhawulezayo. Khumbula, sive izikhalazo ezininzi malunga nokuhamba kunye neengxaki ezisemva. Umba ophambili obangela le ngxaki ye-lag kungenxa yokucotha koqhagamshelo lwe-intanethi.
Ngaphandle koqhagamshelo olucothayo, umthwalo womncedisi ubaluleke kakhulu. Ukuba abancedisi bavalwe ngetrafikhi enkulu ngexesha, oko kunokubangela le ngxaki ixhomileyo. Ukuchasana nalo mbandela kwaye uqwalasele ingxaki ye-lag.
Abaphuhlisi bafaka ezi seva zikhawulezayo zokubamba iividiyo kunye neefayile zeapp. Ngoku ababukeli akufuneki bakhathazeke malunga noqhagamshelo lwabo lwe-intanethi. Kuba iiseva ezikhawulezayo ziya kulawula ngokuzenzekelayo isantya sonikezelo.
Ke uyazithanda iimpawu zesicelo kwaye ulungele ukonwabela iimuvi zeprimiyamu, uthotho kunye ne-IPTV's simahla. Ke kulo mba, sincoma ukuba ukhuphele kwaye ufake iFoxy Android. Oko kuyafikeleleka ukufikelela kwiwebhusayithi yethu ngokucofa okukodwa.
Iimpawu eziphambili ze-Apk
I-Apk isimahla ukuba ikhutshelwe.
Ukufaka usetyenziso kunika ulonwabo olungapheliyo.
Oko kubandakanya iMidlalo bhanyabhanya kunye noThotho.
Izitishi ze-IPTV ezibukhoma nazo ziyafikeleleka.
Ixhasa iintengiso zomntu wesithathu.
Kodwa iya kuvela ngaphezulu kwescreen kunqabile.
I-interface ye-app ilula kwaye i-mobile-friendly.
Uyikhuphela njani iFoxy Apk
Xa kuziwa ekukhupheleni kuhlobo oluhlaziyiweyo lweefayile ze-Apk. Abasebenzisi be-android banokuthembela kwiwebhusayithi yethu kuba apha kwiwebhusayithi yethu sinika kuphela iiApps ezizizo nezenyani. Ukuqinisekisa ukhuseleko lomsebenzisi kunye nemfihlo.
Siqeshe iqela leengcaphephe eliquka iingcali ezahlukeneyo. Ngaphandle kokuba iqela leengcali aliqinisekanga malunga nokusebenza kakuhle kwefayile ye-Apk. Asizange sinikeze i-Apk ngaphakathi kwecandelo lokukhuphela kubasebenzisi be-android. Ukufakela iFoxy Download nceda ucofe kwikhonkco elinikiweyo elingezantsi.
Khumbula ukufaka iifayile ze-Apk ezixhaswe ngumntu wesithathu bekuhlala kuyingozi. Kodwa sele siyifakile ifayile ye-Apk kwii-smartphones ezahlukeneyo ze-android kwaye akukho ngxaki. Ke ukuba ufuna iqonga elikwi-intanethi ke kungcono ufake isicelo esithile.
Iwebhusayithi yethu ityebile kwizicelo ezahlukeneyo zokuzonwabisa. Ezi zidumileyo kwaye zibonelela ngokufikeleleka simahla kwiimuvi kunye nothotho. Ukuphonononga ezi apps ezifikelelekayo nceda ulandele amakhonkco. Ezo zinjalo HDHUB4U Apk kwaye Rlaxx TV Apk.
Eli lelona thuba lilungileyo kubasebenzisi be-android ukonwabela iimuvi ezingapheliyo, uthotho kunye ne-IPTV's simahla. Ekuphela kwento ekufuneka bayenze kukukhuphela uguqulelo lwamva nje lweFoxy Apk ukusuka apha ngokucofa iqhosha lekhonkco lokukhuphela. Kwaye wonwabele iividiyo ezingenamda ngaphandle kokutyala nepeni enye.
iindidi ukonwatyiswa, apps tags Foxy Android, Foxy Apk, Foxy App, Foxy Khuphela, Imovie App Post yokukhangela
Ukhuphelo lwe-HDHUB4U ye-Apk ye-Android [Iimuvi]
I-ZBox MM2 Apk Khuphela ye-Android [Iimovie]